नेपाली क्रिकेट टोलीको घोषणा : शरद भेषवाकर परेनन्, को–को परे ? | Ratopati
काठमाडौं । माघ ११ देखि २० सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँगको एकदिवसीय र टी–२० क्रिकेट सिरिजका लागि आइतबार नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ ।
पारस खड्काको कप्तानीमा तीनजना वैकल्पिकसहित १६ सदसीय खेलाडी टोलीको घोषणा गरिएको हो । आईसीसीका प्रतिनिधि इमिनुल इस्लाम, मुख्य प्रशिक्षक जगत टमटा र कप्तान पारस खड्का सम्मलित छनोट समितिले खेलाडीको घोषणा गरेको हो । प्रारम्भिक चरणमा रहेका २० खेलाडीबाट १६ खेलाडी छनोट गरिएको हो ।
चार युवा खेलाडीले सिनियर टोलीमा स्थान बनाएका छन् । अविनाश बोहरा, भिम सार्की, पवन सर्राफ र सन्दीप जोराले स्थान बनाएका हुन् । यसअघिका नियमित सदस्य शरद भेषवाकर टोलीमा छैनन् । शरदले अस्वस्थका कारण नाम फिर्ता लिएका हुन् ।
ललित भण्डारी, बिक्रम सोब र सुशन भारी वैकल्पिक सुचीमा परेका छन् । सन्दीप लामिछाने बंगलादेश प्रिमियर लिग (बीपीएल) खेलेर सोमबार नेपाल आइपुग्ने छन् । नेपाली टोली मंगलबार युएइतर्फ प्रस्थान गर्नेछ ।
नेपालले युएईसँग तीन एकदिवसीय र तीन खेल टी–२० खेल्न्ेछ । नेपालले माघ ११, १२ र १४ गते एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ । भने माघ १७, १८ र २० मा टी–२० सिरिज खेल्नेछ ।
नेपाली टोलीका खेलाडी , को–को परे ?
ललित नारायण राजवंशी
क्रिकेटमा पनि फुटबलको जस्तै नियम